နေ‌‌‌ဒွေး တို့ ပြသနာ ကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှတ်ချက်တွေကို တစ်ခွန်းထဲ ထိထိမိမိ တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ – Let Pan Daily
ပရိတ် သတ်ြ ကီးရေ နေဒွေးနဲ့သံစဉ်မောင်တို့ရဲ့ ပြသနာထဲ မှာ ပရိတ်သတ်တွေ ရဲ့ ဂရုတစ်စိုက်စိတ်ပါဝင်ခြင်းခံရသူကတော့ သရုပ်ဆောင် ဆောင်းယွန်းစံ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဆောင်း ယွန်းစံကတော့ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်း သရုပ်ဆောင် နေဒွေးနဲ့ သံစဉ်မောင်တို့ရဲ့ ကိစ္စမှာ မဆီမဆိုင် အပြောခံနေရပြီး အထင်အမြင်လွဲခံ နေရတာကြောင့် သူမဘက်က မှန်ကန် ကင်းရှ င်းေ ကြာ င်း ပရိသတ်တွေကို ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိတ်သတ်ေ တွက တော့အခုထိ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေပြီးသူမရဲ့ ပြောစကားတွေကို ထောက်ပြပြောဆိုလာတာပါ။
ဒီကနေ့မှာလည်း သရုပ်ဆောင်နေဒွေး ရဲ့ ပိုစ့်တွေ မှာ cmt ဝင်မရေးဘူးဆိုတဲ့ သူမရဲ့ စကားကို ပရိတ်သတ်တွေ က ထောက်ပြလာတဲ့ အပေါ် သူမကတော့ ခုလိုပဲ ဖြေရှင်းခဲ့ တာပါ။“ဒိကိ စ္စေ လးေ တာ့ ဝင်ရှင်းသင့်တယ်ထင်လို့နော်။ ဆောင်း like မပေး cmt မပေးဘူးဆိုတာ ကိုနေဒွေးနဲ့ သံစဉ်မောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပိုစ်တွေကို ပြောတာပါ။ ဈေးရောင်းပိုစ့်တွေ တခြားမသက်ဆိုင်တဲ့ ပို စ်ေ တွ မန့်ချင်မန့်မယ် စကားပြောမယ်။ ဒါေ ဆာင်းရဲ့ personal လေ။ ညီမတို့ရော ညီမတို့သူငယ်ချင်းတွေဈေးရောင်းရင် ဝင်မဝယ်ဘူးလား.? ဒါနောက်ဆုံးရှင်းတာ။ ကျန်တာ ထင် ချင် တာထ င်တော့ .. ဟုတ်ပြီနော် ဆိုပြီး ပြန်လည် ဖြေရှင်းခဲ့တာပါ။
ပရိတ်သ တ်ကြီးရေ ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ ပြောခံရမယ့် ကံပါလာလို့ ပြောခံ ရတယ်လို့ ပဲမှတ်ယူထားကြောင်းမနေ့ထဲ က ပြောထားတာပါ။ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ေ ဆာင်းယွ န်းစြံ ကားကနားလည်မှုတွေအမြန်ဆုံးပြေလည်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုေ တာ င်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိတ္ သတ္ျ ကီးေရ ေနေဒြးနဲ႔သံစဥ္ေမာင္တို႔ရဲ႕ ျပသနာထဲ မွာ ပရိတ္သတ္ေတြ ရဲ႕ ဂ႐ုတစ္စိုက္စိတ္ပါဝင္ျခင္းခံရသူကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဆာင္းယြန္းစံ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဆာင္း ယြန္းစံကေတာ့ သူမရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနေဒြးနဲ႔ သံစဥ္ေမာင္တို႔ရဲ႕ ကိစၥမွာ မဆီမဆိုင္ အေျပာခံေနရၿပီး အထင္အျမင္လြဲခံ ေနရတာေၾကာင့္ သူမဘက္က မွန္ကန္ ကင္းရွ င္းေ ၾကာ င္း ပရိသတ္ေတြကို ရွင္းျပခဲ့ၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပရိတ္သတ္ေ တြက ေတာ့အခုထိ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနၿပီးသူမရဲ႕ ေျပာစကားေတြကို ေထာက္ျပေျပာဆိုလာတာပါ။
ဒီကေန႔မွာလည္း သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြး ရဲ႕ ပိုစ့္ေတြ မွာ cmt ဝင္မေရးဘူးဆိုတဲ့ သူမရဲ႕ စကားကို ပရိတ္သတ္ေတြ က ေထာက္ျပလာတဲ့ အေပၚ သူမကေတာ့ ခုလိုပဲ ေျဖရွင္းခဲ့ တာပါ။“ဒိကိ ေစၥ လးေ တာ့ ဝင္ရွင္းသင့္တယ္ထင္လို႔ေနာ္။ ေဆာင္း like မေပး cmt မေပးဘူးဆိုတာ ကိုေနေဒြးနဲ႔ သံစဥ္ေမာင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ပိုစ္ေတြကို ေျပာတာပါ။ ေဈးေရာင္းပိုစ့္ေတြ တျခားမသက္ဆိုင္တဲ့ ပို စ္ေ တြ မန႔္ခ်င္မန႔္မယ္ စကားေျပာမယ္။ ဒါေ ဆာင္းရဲ႕ personal ေလ။ ညီမတို႔ေရာ ညီမတို႔သူငယ္ခ်င္းေတြေဈးေရာင္းရင္ ဝင္မဝယ္ဘူးလား.? ဒါေနာက္ဆုံးရွင္းတာ။ က်န္တာ ထင္ ခ်င္ တာထ င္ေတာ့ .. ဟုတ္ၿပီေနာ္ ဆိုၿပီး ျပန္လည္ ေျဖရွင္းခဲ့တာပါ။
ပရိတ္သ တ္ႀကီးေရ ေဆာင္းယြန္းစံ ကေတာ့ ေျပာခံရမယ့္ ကံပါလာလို႔ ေျပာခံ ရတယ္လို႔ ပဲမွတ္ယူထားေၾကာင္းမေန႔ထဲ က ေျပာထားတာပါ။ပရိတ္သတ္ႀကီးနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ေ ဆာင္းယြ န္းၿစံ ကားကနားလည္မႈေတြအျမန္ဆုံးေျပလည္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေ တာ င္းေပးလိုက္ပါတယ္။
တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် အပေါ်ယံသာ လုပ်ပြခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ဝေဖန်မှုများစွာ ခံနေရတဲ့ တစ်ချိန်က ပြည်သူချစ် မင်းသမီး ဝတ်မှုံရွှေရည်
အခါခါ ပြန်ကြည့်ချင် လောက်အောင် ကို ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ “ဝင်းရွှေရည်သင်း”